Ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ya na China Aluzinc PPGL steel coil - Witop Steel
Home > Ngwaahịa > PPGL Steel eriri igwe > Agba Aluzinc PPGL Steel Coil
Agba Aluzinc PPGL Steel Coil Ndị nrụpụta
Qingdao Sino Witop Steel Co., LTD. Ọ bụ onye nrụpụta ọgbara ọhụrụ nke na -emepụta agba mkpuchi aluzinc PPGL steel coil. Na Witop Steel bụ onye na -ebubata ngwaahịa na onye na -ere ahịa na China. Anyị nwere ahịrị mmepụta PPGL abụọ nwere ikike kwa afọ nke tọn 200000.
Sino Witop Steel nwere usoro nrụpụta siri ike, sistemụ njikwa mma, ụgbọ njem lọjistik ọkachamara, itinye ọdụ ụgbọ mmiri na ọrụ nkwado, nchekwa, ntụkwasị obi, ahịrị mbupu dị elu, yana ọrụ nsuso dị mma iji hụ na enwere ike nyefe agba aluzinc PPGL steel coil. .
Agba ntekwasa aluzinc PPGL steel coil is prepainted galvalume steel coil, makwaara dị ka agba mkpuchi aluzinc steel coil. A na -etinye ihe mkpuchi Pullu PinkL agba agba agba na ụlọ ọrụ ihe owuwu, ụlọ ọrụ ngwa ụlọ, ụlọ ọrụ ngwa eletriki na ụlọ ọrụ arịa ụlọ. Dịka ọmụmaatụ, elu ụlọ maka ụlọ nkwakọba ihe, panel sandwich, nsu, mgbidi akpa, ọnụ ụzọ mechiri emechi na ihe ndị ọzọ.
SGLCC AZ70 Agba Aluzinc PPGL Steel Coil
Ihe mkpuchi SGLCC AZ70 Aluzinc PPGL Steel Coil nwere ihe nkiri eserese iji kpuchie elu ya ma chebe nchara ahụ ka ọ ghara nchara, na mgbakwunye na mkpuchi ihe mkpuchi zinc. Ndụ ndụ ihe dị ka oge 1.5 ogologo karịa nke galvanized coil.
0.13MM Agba agba gbara agba Aluzinc PPGL Steel Coil
0.13MM Okpokoro Okpokoro Aluzinc PPGL Steel Coil nwere ihe nkiri eserese iji kpuchie elu ya ma chebe nchara ahụ ka ọ ghara nchara, na mgbakwunye na mkpuchi ihe mkpuchi zinc. Ndụ ndụ ihe dị ka oge 1.5 ogologo karịa nke galvanized coil.
Aluzinc PPGL Steel Coil maka agba ụlọ maka owuwu ụlọ
Aluzinc PPGL Steel Coil nke agba agba maka owuwu ụlọ nwere ihe osise eserese iji kpuchie elu ya ma chebe nchara ahụ ka ọ ghara nchara, na mgbakwunye na mkpuchi ihe mkpuchi zinc. Ndụ ndụ ihe dị ka oge 1.5 ogologo karịa nke galvanized coil.
Akwa na -egbuke egbuke agba ntekwasa Aluzinc PPGL Steel eriri igwe
Nnukwu agba na -acha odo odo Aluzinc PPGL Steel Coil nwere ihe osise eserese iji kpuchie elu ya ma chebe nchara ahụ ka ọ ghara nchara, na mgbakwunye na mkpuchi ihe mkpuchi zinc. Ndụ ndụ ihe dị ka oge 1.5 ogologo karịa nke galvanized coil.
Enwere ike ịhazi Agba Aluzinc PPGL Steel Coil emere na China na ọnụ ala ma ọ bụ ọnụ ala. Ngwaahịa anyị bụ SGS na BV gbaara ezi àmà. Na mgbakwunye, ngwaahịa anyị na -adigide ma anyị na -enyekwa akwụkwọ ikike afọ 10. Witop Steel bụ ndị nrụpụta na ndị na -ebubata ngwaahịa na China na ndị ama ama Agba Aluzinc PPGL Steel Coil. E wezụga, anyị na -akwadokwa nnukwu nkwakọ ngwaahịa. Ọ bụrụ na m nye iwu ugbu a, ị nwere ya na ngwaahịa? n'ezie! Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị ga -enye ọ bụghị naanị nlele efu kamakwa ndepụta ọnụahịa na nkwupụta. Ọ bụrụ na m chọrọ ịre ahịa, ọnụ ahịa ole ka ị ga -enye m? Ọ bụrụ na nnukwu ọnụ ahịa gị buru ibu, anyị nwere ike ịnye ọnụahịa ụlọ ọrụ. A nabatara gị ka ị bịa ụlọ ọrụ anyị ịzụta ihe ọhụrụ, ego mbelata na ogo dị elu Agba Aluzinc PPGL Steel Coil. Ị nwere ike ijide n'aka na ịzụta ngwaahịa mbelata n'aka anyị. Anyị na -atụ anya ka gị na gị rụkọọ ọrụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị ugbu a, anyị ga -aza gị n'oge!